एमसीसीका विरुद्ध विप्लवकाे जनसभा, कुन नेताले के भने ? - MOOLBATO.COM
एमसीसीका विरुद्ध विप्लवकाे जनसभा, कुन नेताले के भने ?
२०७८ भाद्र २९ ०८:४०
काठमाडौं । राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले काठमाडौँमा जनसभा सम्पन्न गरेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले यो देशको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताए । उनले विप्लवतर्फ देखाउँदै एकताकाे लागि आव्हान समेत गर्नुभयाे तर विप्लवले त्यस बिषयमा केही बाेलेनन् । उनले अमेरिका नेपालको विकास, उन्नति र प्रगतिका लागि नभएर देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन लुट्ने उद्देश्यले एमसीसीमार्फत नेपालमा ब्रह्मलुट मच्चाउन आएको बताए । उनले नेपालको हित चाहने हो भने सीधै सहयोग नगरेर किन एमसीसीमार्फत गरेको भनी अमेरिकालाई प्रश्न गरे । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने र नेपालमा टेकेर चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले अमेरिका नेपालमा आएको भन्दै उनले एमसीसी पारित भएको खण्डमा नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता र हितका विरुद्ध छ । एमसीसी जनताका विरुद्ध छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने सम्झौताले देशलाई अफगानस्तिान र सिरिया बनाउनेछ । जनता सार्वभौम हुने व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि जनतालाई व्यवस्थाको फैसला गर्न दिनुपर्छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले नेपालमा राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास भएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुने बताए ।
खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा सम्बोधन गर्दै विप्लवले एमसीसी नेपाली जनता र देशका विरुद्धमा रहेकाले यसको खारेजीका लागि सिङ्गो देश आन्दोलित बनेको बताए ।
विप्लवले नेपाली जनताको अधिकार हनन गर्न खोज्ने हो भने यहाँका मुठीभर दलालहरूविरुद्ध ठूलो आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने बताए ।
यस्तै आईटी आर्मी पार्टीका अध्यक्ष अमर शाहले नेपालका युवाहरूले नै जनताको आफ्नो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने बताए । शाहले देशलाई राष्टघाति सम्झौताबाट बचाउनका लागि सवै सचेत नागरिकहरू एक हुनुपर्ने बताए । यदि एमसिसी पारित भएको खण्डमा देशमा आगो बल्ने र सबै सचेत युवाहरू एकजुट भएर आन्दोलनको आधिबेहरी सिर्जना हुने बताए ।
यस्तै नेपालका लागि नेपालीका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीवादीहरू देशद्रोही भएको बताए । एमसीसीलाई देशबाट लखेट्नका लागि संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउनु पर्दछ उनले भने । सबै जनता एकजुट भएर आन्दोलित भएको खण्डमा यो पराजित हुनेछ उनको भनाई थियो ।
सभाको सञ्चालन पार्टी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सुदर्शनले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य अर्का सचिवालय सदस्य प्रकाण्डले गरेका थिए ।